RAVELOSON CONSTANT : TIAN’NY VAHOAKA HODY NY FILOHA RAVALOMANANA – MyDago.com aime Madagascar
Amintsika miteny izao hoy ny Ct Raveloson Constant androany teny amin’ny Magro Behoririika dia mbola ny androatokon’ny voka-pifidianana no nivoaka ary nifidy an’i Robinson. Dikan’izany dia na niezaka nanamparitaka tahaka ny inona, na nanakatsakana ny namantsika tsy hifidy dia mazava ny hevitry Madagasikara fa tian’ny olona ho hody ny filoha Ravalomanana. Mazava kosa hoy izy fa mananatra ary manafay ny mpanongam-panjakana ny mpifidy tamin’ity indray mandeha ity, ka mahazo mifaly isika. Tadidio hoy Constant fa ny nahombiazantsika nandritra izay dimy taona izay dia tsy hoe isika no nanana miaramila, mpangalatra, tsy isika no mpandoro an’Antananarivo,tsy mirehareha fa
isika ilay nandeha tamin’ny herimpanahiny fa ny hery tsy mahaleo ny fanahy, izay no voaporo tamin’ity fifidianana ity. Noho izany dia tohizantsika ny fandresen-dahatra ny olona fa tsara ny mampody ny filoha Ravalomanana, tohizantsika ihany koa ny fanentanana ny olona amin’ny hery tsy mahaleo ny fanahy. Noho izany dia arahantsika antsakany sy andavany ny tenin’ny filoha Ravalomanana tamin’ny
Sabotsy ,fa ity kianja ity dia tsy azo ho ovaovaina ho kianja fandihizana fotsiny mandrapahatonga ny filoha Ravalomanana. Rehefa tonga eto izy vao miteny hoe ovay indray ny fomba hitondrana ny tolona.Ataontsika hitondrana ny dingana manaraka ity kianja ity. Voaporofo hoy izy tamin’ny propangady rehetra nataontsika fa ny ekipantsika no mahavita mandamina ny firenena, Amin’ny propangadin’ny sasany dia mifanaritaka amin’ny resaka tee-shirt fotsiny fa ny antsika tsy misy tomika na taiza na taiza. Ny an’ny sasany izay ny antsasaky ny vahoaka no manenjika azy any Fort Dauphin fa ny antsika dia ny olona no mitady hoe aiza fa tsy mba nandalo teto aminay akory. Mahalamina ny resaka iraisampirenena isika hoy izy , nanomboka tany amin’ny fanapepoana Ni Ni , nanaraka tamin’ny tsy mahazo kandida Neny,fa tsy maintsy nanana kandida ihany isika ka nankato ny iraisampirenena, ary izy ireo no sahy niteny hoe kandida nahazo vato be indrindra Robinson , ary tokony be dia be ny tokony hifidy. Tairo ny namantsika hoy izy , hiteny indrindra fa ilay olona nisoratra nanana tapakila, ao anaty lisitra kanefa rehefa nivoaka tsy tao izy. Mila ahitsy ny lisitry ny mpifidy. Ny iraisampirenena aza miaiky fa fifidianana madio ny antsika. Ny any Mozambika aza mifampitifitra satria hiatrika fifidianana communale, izay misy an’i Chissano. Ny antsika dia maka anatra amin’ny fomba hitondran’ny filoha Ravalomanana ny raharaha. Ao anatin’ny soratra masina misy hoe aoka ianao hanana ny faharanitantsaina , ny hafetsena, ny fahendren’ny bibilava, ary mitondra ny hamoram-pon’ny voromailala. Na ny iraisam-pirenena aza hoy Constant dia mangina. Isika ihany koa dia aoka izay no ataontsika, Vita teo am-panisana vato ny mandihidihy, vita tamin’ny Sabotsy ny fihobihobiana. Manana faharanitantsaina toy ny bibilava isika, ilay mpaka mpianatra iny hoy izy aza atao hoe manenjindresy, fa ampio ilay olona niady taminao ahatsapa hoe ny miaraka amin’ny Robinson no mahatsara. Nataonao dia niady kandida ianareo, aza avadika ho fankahalana izany. Mila Malagasy isika rehetra, rehefa hoe raisintsik a ny fahefana dia ny malagasy rehetra , ny mpiray fiangonana izany, ka ampio ny olona rehetra ahatsapa fa marina ny làlantsika. Ataovy mihanaka amin’ny rehetra ny hevitra maharesy lahatra anao. Tsy ahavotra sy ahavonjy an’Antananarivo rehefa sazian’ny vahoaka toy io. Rhefea nipoaka hoy izy ny tamin’ny 2009 dia nohoverin’izy mianakavy fa kitapo latsaka ka tsimponina eo amin’ny arabe, ka izao nampianarin’ny vahoaka . Tsy vongan’olona hampitondraina tee-shirt ianareo fa ianareo dia hafa ny dikany teet-shirt sy ny saina ho entinareo. Ny antsika hoy Constant dia firenena no dikany ireny, mibaby sy mitrotro ny firenena. Isika samy isika hoy izy aoka hifampitondra toy ny mpirahalahy, aoka izany ny milaza fa izaho no tena izy fa ianareo fanampiny fotsiny.
Raha tsy teto ianareo tsy nisy, ka io manao fanilikilihana io no nandevina ivoho ny filoha Ravalomanana. Aoka tsy hanao taha tsy
vinitra , ka ity farany eto dia ny heo ianareo ve hahafeno ny colesium, ianareo ve ho eny Andohatapenaka fa Camille hanao eo akaiky
eo, zavanisy izany hoy izy. Mila mandresy isika, izany mandrsey tapany izany dia ataon’ny olona mihinana ny tsy fihinany.
14 réflexions sur « RAVELOSON CONSTANT : TIAN’NY VAHOAKA HODY NY FILOHA RAVALOMANANA »
Ny zavatra mahagaga amin’izao fotoana izao dia ity:
Resaka kajy niveau T5 no atao ao amin’ny Cenit dia nahoana no tsy mbola hita foana ny valin’ny fifidianana.
Na tsy manana niveau T5 ireo olona ao ireo na manao soloky dia mila fotoana be toy izao. Efa nisain’ireo bureau de vote anie ireo pv ireo e! Totaliny no angatahina avoaka nefa dia iray andro tsy vita.
Mila midina an-dalambe amin’izay angamba fa tsy mety izao e!
Mbola miady HO AZY ny MPANJANAKA 🙁
Izay koa izany no naha be diso ilay karam-pifidianana ry IZY???
50% izay mba karam-pifidianana natontan’ireo cenit mantsy dia diso daholo,
fa ny nahagaga dia ny adresy marina fa ny anarana no diso???mahagaga ihany???
nitsom-ponenana daholo izany ny 50% T@ IREO MBA NAHAZO KARATRA????
Mba inona no tenin’ireo mpanohana an’i Ra doko fa tena efa tsy menatra intsony anie ireo tsy valahara ireo é ! Aza matory fa mba mitsangàna anareo ttompon’andraikitra voalohany ao e ! Aiza koa ka misy miaramila miditra en @ CENIT zao !
Aoka ny kabary lava fa JEREO ARY MITSANGANA mankany @ CENIT fa raikitra ny ra MATAHORA eny ka ho very fanantenana eo ny antsika e !
Hamoaka ny chiffres sy ny heviny hono ny CES fa tsy hanaraka fotsiny izay lazain’ny CENI-T.
FA INONA NO HAVOAKANY.
SAMIA MATOKY « NY TENA MPITARIKA », FA MANAO NY ASANY « TENA ARA-DALANA » IZY.
Misy mantsy toa tsy hita intsony hatramin’ny tsy naha-candidat an’i Lalao RAVALOMANANA,
hoy ao @ TIM : RAMISY :
Envoyé par: Ramisy (Adresse IP journalisée)
Date: lun. 28 octobre 2013 15:23:16
Après le premier tour : les brebis égarées reviennent au camp n° 33
28/10/2013 à 15:49 11 commentaires
… Des pièces maitresses comme la sénatrice Eliane Naika continuent malgré tout à garder le silence. FA NANKAIZA HONO ?
hery vaovao ho an’ny mpanjanaka tandremo tsy maintsy zareo hono no ho eo raha tsy izany dia miverina zero indray ny compteur(crise vaovao)
Misy olona voakarama handemy mihintsy eto, mankaleo!!!
Ny tena mandreraka dia mody manovanova anarana foana ary mahavatra miteny irery
mihintsy fa mihevitra olona ho vongany ohatra azy mihintsy izy IO. MARARY SAINA!!!
29 octobre 2013 à 2 h 42 min
Betsaka no tsy afaka mpifidy, ny vali-pifidianana éto Antanananarivo mbola tsy mivoaka, Angamba mbola nalefa sana hélicoptère ny fakana vali-pifidianana tetsy Isotry sy Itaosy….. Eo koa ireo miaramila mpanogam-panjakana nanao @ CENI-T, hanova ny vali-pifidianana an-keriny. Efa hita tao @ tranokala,’n’y CENI-T ohatra fa i fery vaovao dia nahazo 49% ‘…
Aoka ny Ny AVANA sy ny ankolafy Ravalomanana tsy niandry fandresena eo,fotsiny fa tokony hijery sy tsy hanaiky izany mihitsy. Ary izao dieny izao,ihany dia mihetsika. Mijery ny logiciel-n’y CENI-T mianatra maso ny fanisana ary indrindra tsy manaiky ny fahatogavan’ireo miaramila ao @ CENI-T.
29 octobre 2013 à 3 h 40 min
NY TENA GASY SY MAINTSY MANDRESY = JLR NO FILOHA NINON N INONA LAZAINA
TELO AMBY TELO NO NAROTSAKAY DE TSIMAINTSY MODY NY DADANAY
NEFA MITANDREMA ISIKA FA TSY KELY LALANA NY RATSY
MAZOTOA MITOLONA SY MITONDRA AMBAVAKA NY FIRENENA
MANKAHERY NY DR JL ROBINSON NY EKIPA REHETRA NY ZANAK’I DADA ARY I NENY LALAO R.
@tsetsatsetsa tsy aritra,
Mety ho fomba fanakorontanan’ny foza daholo ireo! Noho izany mila mitandrina sy mandinika tsara amin’ny fandraisana ny vaovao toy itony, satria ny mpanao: « ZARAZARAO HANJAKANA » dia tena miasa mafy hatrany!
Aoka tsy hifanipaka sy hifanosika, fa fandresen-dahatra no ataovy!!
Izaho manokana dia maniry sy mirary ny hiverenan-dramatoa Naika Eliane!
Namana niara nitolona ireny, aoka tsy ho adino izany!
Hevitro manokana izany! n’inona inona mety hilazan’ny sasany ahy!
Précédent Article précédent : Vokatra vonjimaika (7h) ROBINSON Jean Louis : 30.89%
Suivant Article suivant : Mijotso ny tahan’isa, inona ny antony ? ROBINSON Jean Louis : 28.91%